Isicoci se-Metal Mesh sangaphambi kokucoca isihluzi se-Aluminium enemingxunya ngaphambili-Isihluzi sakuqala -Isixhobo esenziwe ngeSinyithi seMesh esisezantsi sokucoca isihluzi seAluminiyam sangaphambi kokucoca isihluzi, Umthengisi -Fektri -Shanghai Sffiltech Co., Ltd.
Amacebo okucoca kwangaphambili
Ikhaya>iimveliso>Ukucoca uMoya woShishino>Amacebo okucoca kwangaphambili
Isicoci seMetro yangaphambi kokucoca ulwelo lweAluminiyam enemingxunya yangaphambi kokucoca ulwelo
IFilitha ethandwayo yangaphambi kweMetal Mesh kunye ne-Metal Frame, iklasi G3 ukuya kwi-M6
Ukusetyenziswa: Njengokucoca kwangoko kwinkqubo yemeko yomoya
Uhlobo: Icebo lokucoca kwangaphambili
Imithombo yeendaba: I-polester fiber
Isakhelo: Yintsimbi egalelweyo / iAluminiyam / ABS
Ukucetyiswa kokugqibela okucetyiswayo: 250Pa
Ubushushu: I-100ºC iphezulu kwinkonzo eqhubekayo
I-10 pleats / iinyawo, ezingama-25% aphezulu kwimveliso eqhelekileyo
Ukuhluza imithombo yeendaba kunye nesakhelo usebenzisa ukubambelela ngokudibanisa, isakhiwo esomeleleyo
Imithombo yeendaba yeefiltha ingatshintshwa, isakhelo sinokuphinda sisebenze
Icebo lokucoca ulwelo kunye ne-mesh yensimbi eqinisiweyo
Ubukhulu Vs Ukusebenza ngokuchaseneyo nokwehla koxinzelelo
Uxinzelelo loxinzelelo (pa)@2.5m/s
Ubungakanani vs Ukuhamba komoya
Imilinganiselo (W * H)
Ukuhamba komoya (m3 / h)
Uyikhetha njani ifayile yemfumba?
Ubungakanani beesayizi ezikhoyo
I-3.Frame: Intsimbi ye-GZ yentsimbi, iplastiki ye-aluminium
Icala le-8.Up: i-gasket okanye hayi?
9. Ukubonakalisa umsesane okanye hayi?
10.Down ecaleni: gasket okanye hayi?
11. Ukubonakalisa umsesane okanye hayi?
Ukuzibandakanya ekudaleni imeko-bume ecocekileyo nentsha yabantu, iSffiltech ikhethekileyo kwifilitha yangaphambi kokucoca ulwelo ngesinyithi nakwisakhelo sesinyithi. Njengomnye wabenzi nabathengisi ababalaseleyo, sinokuqinisekisa ukuba umgangatho ophezulu kunye nokusebenza okuzinzileyo kweemveliso zethu zesiko. Nceda uqiniseke ukuba uyayithenga.
Imithombo yeendaba yeG3 G4 yeGlass fiberglass yokuCoca iMithombo yeNdawo yokuCoca
I-Synthetic Fibre ye-G4 yokuQala okuSebenzayo okuMhlophe okuHlambekayo ngaphambi koMoya oHlaziyiweyo woMqhaphu weMpahla yoMvelisi
I-nylon enemingxunya yomoya ngaphambili